Tsvaga mazano ekushandisazve hombe magirazi emidziyo | Bezzia
Susana Garcia | 01/05/2021 10:00 | Yakagadziridzwa ku 29/04/2021 21:00 | Musha
El inoshanda uye yekugadzira marara ndeimwe yezvakanakisa zvinhu izvo zvatingaite kuti tiite hupenyu hwedu huwedzere kugadzikana zuva nezuva. Mazuva ese tinoshandisa zvirongo zvegirazi muzvikafu zvakawanda zvakaita sejamu kana bhinzi. Makani aya anogona kukandirwa mumudziyo unoshandiswa zvakare asi tinogona zvakare kushandisa mamwe kugadzira zvinhu zvitsva, inova imwe nzira yekudzokesa zvakare inopa hupenyu hwakareba kugirazi.
Ndokusaka nhasi tichaenda ona mashandisirwe emidziyo yegirazi, yakapusa nyore iyo isu tese tinayo kumba uye neyatingaite nayo zvinhu zvikuru. Tsvaga uye utore zvese izvo zvirongo zvegirazi izvo iwe zvawakarasa kure kusvika zvino uye gadzirira kuzvishandisa zvakare kune zvakasiyana zvinhu. Iwe uchaona kuti kune nyika yese yekutsvaga.
1 Magirazi egirazi ekuchengetera zvinonhuwira
2 Dyara zvinonhuwira muhari dzako
3 Shandisa zvirongo sezviputi
4 Gadzira marambi anoshamisa
5 Magirazi egirazi ekuchengetera zvinhu
Magirazi egirazi ekuchengetera zvinonhuwira
Pfungwa yakanaka kana iwe uchida kuchengeta zvinhu zvakati wandei kuunganidza magirazi egirazi ane saizi yakafanana kana dhizaini dzakafanana. Nenzira iyi zvichave nyore kwazvo kuti zvese zvibatanidze uye zvioneke zvakanaka. Iwewo unogona kudaro tenga zvakafukidza zvakafanana kana kuzvipenda muvara rimwe chete. Zviri nyore kuwana zvinyorwa zvezvinhu zvakasiyana sekofi, zvinonhuwira, kana makuki, asi kune zvekare mabhodhi-akafanana nemavara iwe aunogona kunyora pane gare gare uye anowirirana. Iyo yakanaka nzira yekushandisa zvakare magaba uye kwete kutenga vamwe kuchengeta aya marudzi ezvinhu. Nzira yekushandisa zvakanyanya kushoma.
Dyara zvinonhuwira muhari dzako
Zvinonhuwira zvidiki zvinogona kudyarwa munzvimbo diki. Saka ichokwadi kuti tinogona kushandisa magwa aya kudyara vamwe vakaita separsley shoma kana oregano semuenzaniso. Kudyara rudzi urwu rwechinhu kunotibatsira kuti tisatenge zvakanyanya uye tinoona zvakare kunakidza kwazvinogona kuita zvako zvinhu zvakadai nezvinonhuwira zviri nyore kugadzirisa nekuchengetedza. Nenzira iyi unenge uine nyowani nyowani parsley yako mukicheni uye pasina kuisa mari yakawandisa.
Shandisa zvirongo sezviputi
Imwe nzira yekudzokera ku kushandisa izvi zvidimbu zvegirazi kutakura zvekudya pakati pemangwanani kana masikati. Ichokwadi kuti zvirongo zvinogona kuyera zvakanyanya asi girazi rine hutano zvakanyanya kana tichizopisa chikafu mu microwave kana kushandisa zvakare. Mumidziyo iyi unogona kutakura masalads kana zvidyiwa zuva nezuva kuti udye kubasa kana kwaunodzidza. Nenzira iyi iwe unokwanisa kuashandisazve kakawanda.
Gadzira marambi anoshamisa
Magirazi egirazi zvakare zvakare chidimbu chinogona kuve shandisa kushongedza kwedu kwemusha. Mune ino kesi tinogona kushandisa magirazi emidziyo sezvikamu zvemwenje yemaindasitiri mwenje. Kune mwenje mizhinji ine mabhuru mumhepo asi isu tinokwanisa kushandisa magaba kuratidza mwenje wakawanda uye nekuipa kwakasiyana kubata, kwakawanda kwemaindasitiri uye kwepakutanga kuchiri. Iko shanduko yakaoma kuita asi inogona kuve mwenje unoshamisa zvechokwadi.
Magirazi egirazi ekuchengetera zvinhu
Aya magaba akanaka pakuronga zvinhu kumba. Uye zvakare, ivo vakakwana kukicheni, saka kune vanhu vazhinji vanozvishandisa mukicheni kuronga zvinhu zvakaita sekucheka. Unogona wedzera tag kuti uwane zvese pane yako saiti uye shandisa hari kwenzvimbo yega yega yekumisikidza. Iyo iri nyore nzira yekuvachengeta padyo padyo patinovada. Saka isu tinogona kuve neanonyanya kushandiswa padyo muzvikepe. Iyo pfungwa yakapusa asi inogona kuve yakanaka kwazvo kana tikasarudza magirazi egirazi akanaka anogona kushongedzwa nemachira kana tambo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Musha » Pfungwa dzekushandisa zvakare magirazi egirazi
Kukosha kwekufefetedza imba zvakanaka